ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေစဖို႔ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့အစားအစာမ်ား by popolay.com
09 Jul 2019 12,150 Views
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့ ဘဝကြီးမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ် အကျိုးပြုမှုတွေက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်လို့နေပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဦးနှောက်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ မကြာခဏ မေ့နေတာမျိုးတွေ မှတ်ဉာဏ်အားနည်းတာမျိုးတွေဟာ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကိစ္စရပ်တွေကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေပါတယ်။ ဒီလိုနှောင့်နှေးစေရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဘာဖြစ်မလဲ? သင်နေ့စဉ်စားသုံးလေ့ရှိတဲ့ အစားအစာတွေကိုရော ဆန်းစစ်ပြီးပြီလား? ဒီမှာ ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေဖို့ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘီစကစ်လို အသင့်စား အစားအစာတွေဟာ အဆီပါဝင်မှုနှုန်းများပြီး သကြားဓာတ်ပါဝင်မှု များပြားတာကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာအချို့ကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘီစကစ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အရင်ကထက်လျော့စားဖို့ လိုနေပါပြီ။
အချိုရည်ဆိုတာနဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်၊ အသီးဖျော်ရည်၊ ဓာတုဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အသီးအရသာ ဖျော်ရည်ဘူးများ အစရှိသည်တို့မှာ သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုများပြီး သွေးဖိအားကို မြှင့်တက်စေတာကြောင့် ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ မူမမှန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၃။ ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်များ
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပါဝင်မှုနှုန်းများတဲ့ ပေါင်မုန့်ကိတ်မုန့်တွေဟာလဲ ပြည့်ဝကစီဓာတ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ဦးနှောက်ကို လေးလံထိုင်းမိုင်းစေပါတယ်။
၄။ ပီဇာ၊ ဟမ်ဘာဂါ
အသင့်စား အစားအစာများဖြစ်တဲ့ ပီဇာ၊ ဟမ်ဘာဂါတို့ဟာ ဆိုရင် အသီးအရွက်များပါဝင်ပေမယ့် စားသုံးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်ရှိသွား ပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေအကုန် သကြားဓာတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခံလိုက်ရတာကြောင့် ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်စေဖို့ဦးတည်နေပါတယ်။
အရက်ဟာ ဦးနှောက်နဲ့ တခြားသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆက်သွယ်ဖို့ အနှောင့်အယှက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်အရက် အလွန်အကျွံသောက်သူတွေဟာမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း၊ စိတ် ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံမကြည်လင်ခြင်း အစရှိတဲ့ ရောဂါဝေဒနာကိုခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။